ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အတိုင်းအတာတခုအထိ ရှိသင့်နေပြီလို့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင် သုံးသပ် (ရုပ်သံ)
နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အတိုင်းအတာတခုအထိ ရှိသင့်နေပြီလို့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင် သုံးသပ် (ရုပ်သံ)
Nyilay nay nyo zin Im totally aprecieate on you .Ko min zeya and Ko Nay myo zin im acknowledge for your sacrifice on the Burmese peoplr.with fully respect. Please Takecare Ko Freddie. UK
ညီလေး မင်း အလွန်ဆုံး ရှိမှ ၃၅ လောက်ပေါ့ အပြစ်မပျော်ပါဘူး မင်းမှန်တာခပ်များများပါ
ဒါကေမဲု့ တော်တော်ချိန်ဆရတယ် ဆိုတာကို
မင်းအိမ်ထောင်ကျ ပြီးရင် သိလာမှာပါ ဒါပေမဲ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကြောင်း တွေကလုံသင့်တယ်
ဆိူတာ နိုင်ငံရေး လုပ်တယ့် ဝေဖန်တဲ့ လူတွေ
ဝေဖန်တဲ့ လူက ငါဘယ်ဘို ဖြတ်သန်း လာလဲ
ဆိုတာ ဆရာ ရွှေဥိဒေါင်း တို့လို ဆရာ စိန်ခင်မောင်ရီ
ဆရာ သော်တာဆွေတို့လို အဆင့်အတန်းရှိသင့်တယ်
ကလေဝေကလ၀ တွေတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး
ဆရာရွှေဥဒေါင်းက လူတော်လူ စုံ လူရွတ် အတွေးအခေါ်နဲ့စနစ်တကျစဉ်းစားတတ်တဲ့စာရေးတော်တဲ့သူ။သော်တာဆွေက လူပျော် လူတော်။သူတို့တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကလည်း ကလေကဝ ပေပေတေတေ တွေရှိတယ် ဆရာပီမိုးနင်းက ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့တွေရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ရပ်တည်ချက်။ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုတွေကိုတော်ရုံတန်ရုံလူ ယှဉ်လို့မရဘူး။
နိုင်ငံရေးကနက်နဲတယ် တစ်ဆုံးဝင်ဝင် သလောက် ပေးဆပ်မူတွေရှိတယ် အသုံးကျခံ မဖြစ်ဘို့
ထိရောက်ဘို့ နောက်ကြောင်းရှင်းဘို့ Pratical
ုလူတွေ အကျိုးရှိဘို့လိုတယ် ရှင်းရှင်း ပြောရင်
ဘယ်သူမှ မယုံနဲ့ Blind ကြီး လူတိုင်းကို သံသယ
ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး လူအများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေ
တယ် တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေး သာစိတိထားပါ
လူတစ်စုမကောင်းတာကို လစ်လှူရှူပါ Pratical က်ုကြည်ှုပါ ပါးစပ်နဲ့ လေနဲ့ လုပ်တဲ့ ပြောတဲ့ သူတွေ
ကို အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ ညီမညီ အရင်စောင့်ကြည့်ပါ
ကိုယ်မှန်တယ် ယူဆတာကို ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ဆောင်ရွက်ပါ
မနှိုင်းပါဘူး။အပေါ်က comment မှာရွှေဥဒေါင်းတို့ သော်တာဆွေနာမည်တွေ့လို့ အလွမ်းပြေ ဝင်ရေးတာပါ။ နေမျိုးဇင်အကြောင်းကို မသိပါ။
Ko NMZ ညီလေး ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ တွေများနေတယ်
အဖိနိပ်ခံ တောင်သူနဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ အလုပ်သမားတွေဖက်က ရပ်တည်ပေးတာ
ကောင်းပါတယ်။ ၂၀၁၅ မှာဝင်နွဲု လို့ ရအောင် ပြင်ထားပါ။
စာဖတ်ပါ ။ နောက်ဆုံးမြေပြင် အခအန Up to date ဖြစ်အောင်လေ့လာပါ
စကားတွေ မကျွံ စေနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ရင် ဒေါသမကြီးရဘူး